I-Dilworth e-The Historic Morehead Inn B&B - I-Airbnb
I-Dilworth e-The Historic Morehead Inn B&B
Leli gumbi elikhanyayo, elibukekayo linokufinyelela kuvulandi (kwabelwane ne-Arosa) elibheke egcekeni. I-balcony inetafula elinezihlalo kanye nokushwibeka kompheme. Igumbi linombhede omuhle wepensela olingana nendlovukazi, ibhavu neshawa, kanye nokukhanya kwesibhakabhaka endlini yokugezela. Indawo enkulu izivakashi ezi-2; wonke amanani ahlala kabili.
Izivakashi zasebusuku e-Morehead Inn zijabulela amagumbi ezivakashi ayingqayizivele agcwele impahla yesikhathi kanye nenqwaba yezinsiza ezinhle. Amanani ethu ahlala abantu ababili futhi ahlanganisa indawo yokupaka etholakala mahhala, okugeza okuyimfihlo okune-Nest Fragrances NY nezingubo zokugeza zikanokusho, ibhulakufesi eliphekiwe laseNingizimu, i-inthanethi engenantambo, i-cable TV, ukushisisa okumaphakathi nomoya, namafeni osilingi. Siyinkampani ezinikele eqaphela imvelo, egxile ekongeni amanzi namandla, kanye nokukhawulela amapulasitiki asetshenziswa kanye. Ikhaya lethu eliseDilworth elibanzi nelinomlando linezindawo zomlilo ezisondelene kakhulu, amagumbi angasese aphambili.